ICoronavirus igadle kwiChippa ngaphambi komdlalo neSuperSport - Impempe
ICoronavirus igadle kwiChippa ngaphambi komdlalo neSuperSport
Ukubuya ngamawala kweCoronavirus eNingizimu Afrika kwenza wonke umuntu ahlale ethukile ngoba akwaziwa ukuthi leli gciwane lizogadla nini.
Amaqembu ePremier Soccer League (PSL) ayathinteka kakhulu kulolu bhubhane ngoba abadlali bahamba ezifundazweni ezihlukene beyodlala imidlalo yeDStv Premiership neyeGladAfrica Championship.
NgoLwesithathu iChippa United iqinisekise ukuthi iCorona isiphinde yavakasha eqenjini ngaphambi kokuthi libhekane neSuperSport United koweDStv Premiership, eLucas Moripe Stadium, ngo-5 ntambama.
“IChilli Boys ithanda ukwazisa mayelana nabatholakale beneCovid-19 ngaphambi komdlalo wethu wanamuhla (ngoLwesithathu). Lokhu kulandela ukuhlolwa esihlale sikwenza njalo, esikwenze ekuqaleni kwaleli sonto,” kusho isitatimende esithunyelwe yiChippa kwiPSL.
“Abathintekayo uMlu Mazibuko, unozinti, Ismail Watenga, unozinti nephini lomqeqeshi uSiya Gwambi.”
Nokho zikhona izindaba ezinhle kwiChilli Boys ngaphambi kokuthi ibhekane naMatsatsantsa a Pitori.
“Ngemuva kokudlala kahle kwiDStv Diski Challenge unozinti uKwanele Nkabi unyuselwe eqenjini elikhulu. UNkabi, oneminyaka engu-20 nongowokudabuka ePort Elizabeth, uzobe esebhentshini ngoLwesithathu,” kuphetha isitatimende.
Ngemuva kwalo mdlalo iChippa izolibangisa KwaZulu-Natal lapho izobhekana khona neLamontville Golden Arrows emdlalweni wePremiership, eSugar Ray Xulu Stadium, eClermont, ngoMgqibelo ntambama.
Previous Previous post: Sifuna ukuhamba ibanga elide kwiChampions League: Billiat
Next Next post: Kubhuntshe umdlalo weWestern Province neSharks ngenxa yeCovid-19